Fifidianana ben’ny Tanàna: vaky ny ady an-tranon’ny Tim ao Mandrosoa Andramasina | NewsMada
Fifidianana ben’ny Tanàna: vaky ny ady an-tranon’ny Tim ao Mandrosoa Andramasina
Isehoana disadisa sahady aty am-piandohana noho ny amboletra sy ny fanandrantena. Nivory an-tsokosoko tsy nifampiera amin’ireo mpikatroka Tim sasany, herinandro vitsy lasa izao, ireo mihevitra sahady ny tenany ho kandidà ben’ny Tanàna ao amin’ny kaominina Mandrosoa any amin’ny distrikan’Andramasina. Nanapa-tena ho kandidà ny mpitarika tanora any an-toerana nampian’ireo andian’olona sasany nantsoina manokana sy miandany aminy ary efa nanao fitanana an-tsoratra maneho ny fahavitan’ny fifidianana ifotony hanendrena ny kandidà ben’ny Tanàna any amin’ity kaominina ambanivohitra ity. Tsy niantso na nampiantso ireo mpikambana sasany na ny mpanolotsain’ny Tanàna avy amin’ny Tim izy ireo tamin’izao fivoriana an-tsokosoko izao. Velon’ahiahy, noho izany, ireo manana ny heviny sy ireo mieritreritra ny olona tokony harotsaka ho kandidà eo anivon’ity antoko ity. Mety hampivaky indray ny Tim any an-toerana sy hiteraka savorovoro izany ary hiantraika any amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna izao fihetsiky ny andian’olona sasany izao.
Hanairana ny depiote sy ny Tim foibe
Ahina ho tonga amin’ny fanapahan-kevitra hafa sy mety handraisan’izy ireo fepetra hiatrehana izany fifidianana eny ifotony izany. Etsy andaniny, tsy mahatapaka ahitra sy tsy maka ny fanapahan-kevitra ny eo anivon’ny Distim, raha mbola misy sy mijoro izany na koa ny depiote vaovao avy amin’ny Tim, voafidy any an-toerana.
Manoloana ireo, manaitra sy miantso ny eo anivon’ny Tim foibe ny mpikambana sy ireo mpanolotsaina Tim ireo hijery akaiky ity toe-draharaha ity. Maro ireo mihevitra ny hanolotra kandidà hafa noho ny tsy fahafenoan’io nisora-tena ho mpirotsaka hofidina io ny fepetra sy hahazoany ny vaton’ny mpifidy. Hampihemotra ny fientanam-pon’ireo mpikatroka sasany ary hampivaky tanteraka ny Tim na koa hahatonga ny sasany hiroso amin’ny dingana hafa izao tsy firaharahana na tsy fihainoana sy ny fanilihana ny hafa ataon’izy ireo izao.